Kuendesa kweUridzi hweMhando dzakasiyana dzeBhizinesi
"Kuverengerwa kunopa iwe zvirinani kutonga uye dzimwe sarudzo kana yave nguva yekuendesa muridzi."
Usati waisa, kufunga kunofanirwa kuve ako epamberi zvirongwa zvebhizinesi. Kusanganisa chero rakasarudzika repamutemo sangano rinopa kuchengetedzwa kwemutoro uye yakawanda mutero bhenefiti, sezvatakambokurukura kare mugwara iri. Iye zvino isu tichataura kuchinjika kwebhizinesi rako seyakaisirwa chimiro.
Kana iwe usina kubatanidzwa, zvichireva kuti urikuitisa bhizinesi sega muridzi kana kudyidzana, iro bhizinesi rinongovapo chero bedzi muridzi wega kana vadyidzani vari kuita bhizinesi. Izvi zvinoguma parufu kana kubhuroka kwenhengo. Mushure mekupinza, bhizinesi rako rinogona kuenderera mushure meimwe yezviitiko zvataurwa zvemuridzi. Makambani ane nguva isingaperi, ichokwadi chakaparadzaniswa zviri pamutemo "munhu" uye matunhu mazhinji anotendera maSoft's kuti asarudze kwenguva isingaperi.
Kana iwe uine zvirongwa zvekukudza bhizinesi rako uye wopedzisira uchitengesa zvachose kana kuchengetedza humwe muridzi uye kutengesa chikamu charo, iwe uchafunga kutamisirwa usati waisa. Pamwe iwe unoshuvira kuendesa bhizinesi rako pasi kunhengo yemhuri.
Kuchinjisa Huridzi hweChikwata
Makambani ari kure, ari nyore kumarudzi ezvivakwa zvakaumbirwa kutamisa, ingave iri chikamu kana kambani yese. Sezvatakambokurukura pakutanga muchirongwa ichi, C Masangano haana muganho zviri pamutemo panhamba kana mhando dzevagovani. Paunosanganisa nekusarudza S Corporation Sarudzo, pane zvinorambidzwa panhamba uye mhando yevanogovana.
Kazhinji chibvumirano chemugovani chinoiswa munzvimbo yekuona kubatana kwevashandi. Ichi chingori chibvumirano chinosunga, chinodzivirira uye / kana chinogumira vagovani kubva pakutora zvimwe zviito kana kuita zvimwe zvinhu. Muchibvumirano ichi pane zvigadzirwa zvekugovana share. Izvi zvinovhura nhandare yevanosara vagovana mari kuti vasarudze vezera ravo. Izvi zvinogona kudzivirira bhizinesi kubva kune vanotarisira vagovani nechinangwa chekutora bhizinesi. Ikoko hakugone kuve nekuomeserwa kwakasimba pakutengeswa kwesitoko, matare haatsigire chiito ichi. Saka pane zvisina kumanikidza matanho anowanzo kuvepo munzvimbo. Izvi zvinowanzoreva kuti chero mugovani anoshuvira kutengesa zvake / zvikamu zvake zvebhizimusi anofanira kutanga apa masheya kune avo vanogovana navo kana bhizinesi. Kana iro bhizinesi kana chero vamwe vagovani vasingatenge stock iripo, saka inenge yakavhurika kune vekunze vatengesi.
Kana zvirongwa zvako zvemberi zvebhizinesi mushure mekubatanidza zvinosanganisira kuunza varimi, kutengesa bhizinesi muchidimbu kana kuzere kana kuchipfuudza kune mumwe munhu, kusanganisira seSangano rinofanirwa kuongororwa zvakaringana. LLC's, iyo yatinozopinda mune inotevera, inogona kuendeswa, zvisinei maitiro acho anogona kuwana akaomesesa.
Kuchinjisa Huridzi hweI LLC
Zvikwereti Zvikwereti Makambani akanyanya kuchinja uye anotongwa nezvibvumirano. Kazhinji idzi inhengo kana zvibvumirano zvevakabatana uye / kana chibvumirano chekushandira LLC chakagadzirwa mushure mekunge mabatanidza. Aya magwaro akakosha anoraira maficha eiyo muridzi. Zvese zvakatsanangurwa uye zvakagamuchirwa mumagwaro aya. Kugadziriswa kwemakakatanwa, nhengo kubvisa, kuvhota uye kufambiswa kwechido kungodoma vashoma. Izvi zvinogona kuwana zvakakwana zvakakwana uye varidzi ve LLC vane zvakawanda zvemukati zvinorambidzwa. Kazhinji izvi zvinokonzeresa kuti nhengo iunze chishuwo chayo chekutengesa chikwereti kune vamwe, vanozotora vhoti kuti vobvumidza chiitiko ichi kuti chiitike. Pachave nezvipo pachiitiko chekuti nhengo ibve panotangira maitiro akaitwa mushure mekuvhota kwakawanda.
Zvichienderana nehuwandu hwevaridzi uye rakarongeka sangano rekambani yako, iyo LLC inogona kuramba ichikupa mota yakasimba iwe kana iwe uchibatanidza uye kutsigira ramangwana zvirongwa zvebhizinesi rako. Makambani akave akareba chimiro chekutanga chekutengesa uye kuendesa varidzi, zvisinei izvo zvakare zvinofanirwa kusanganisira uyo uye nezvaunoronga pakutengesa kana kuendesa bhizinesi rako. Kana iwe uchida kuramba wakavhurika kune chero huwandu uye mhando yemusimari kubva chero kupi pasirese, S Corporation inogona kunge isiri yako sarudzo yekubatanidzwa. Kana bhizinesi rako rakabatwa zvakanyanya uye iwe uchironga kuendesa wega kune imwe nhengo iriko, mudiwa kana mumwe munhu musangano, unogona kuzadzikisa izvi nekuwedzera kuchinjika kwekuisa iyo LLC.